Qiso Cibro Qaadasho Leh:
Amiirkii Mu'miniinta Cumar binu Khadhaab ayaa waxaa u yimid saddex nin oo wada nin dilay Aabbahood, waxayna dhaheen Amiirkii Mu'miniitow waxaan doonaynaa inaad ninkaan noo qisaastid wuxuu dilay Aabbaheen, Cumar aya ninkii waydiiyay maxaad u dishay Aabbahood? wuxuu yiri waxaan ahaa nin xoolo raac ah mid kamida xoolahaygii ayaa cunay geed ku yaal beerta Aabbahood kadib dhagax ayuu neefkii ku dhuftay wuuna dhintay anna isla dhagaxii ayaan ku dhuftay Aabbahood sidii ayuuna u dhintay.
Cumar (RC)aya yiri hadday saa tahay waa in lagu qisaasaa xadkana lagaa oofiyo, ninkii ayaa yiri Amiirkii Mu'miniintoow saddex bari isii waayo Aabbahay waa dhintay wuxuuna ifka ugu tagay aniga iyo walaalkay iga yar iyo kayd xoolo ah, hadaad idisho way dayacmayaan walaalkay iyo kaydkuba, Cumar aya yiri yaa damiin kaa noqonaya? ninkii ayaa fiiriyay wajiyadii dadka wuxuuna dhahay ninkaa (Abuu Darr), Cumar ayaa Abuu Darr ku yiri: ninkaan madamiinan, wuxuu dhahay Abuu darr haa Amiirka Mu'miniintow, Cumar aya dhahay ninkaan mataqaanid hadduu baxsadana adigaa xadka lagaa oofin, Abuu Darr wuxuu yiri: haddii lawaayo aniga xadka iga oofi, Sidii ayaa lagu siidaayay ninkii.
Saddexdii maalmood markay dhamaatay wax yar ka hor salaadda Maqrib ayuu iskeenay ninkii isagoo aad u daalan wuxuuna hor istaagay Amiirka Mu'miniinta Cumar binu Khadhaab wuxuuna yiri: waxaan u dhiibay Walaalkay iyo keydkiiba Abtiyaashii, anna waxaan ahay gacantaada ee iga oofi xadka, Cumar binu Khadhaab ayaa aad ula yaabay ninkii wuxuuna yiri: maxaa kusoo celiyay oo aad u baxsan wayday? wuxuu yiri ninkii waxaan ka baqay in ladhaho balan oofintii ayaa dadka ka dhamaatay, Cumar ayaa weydiiyay Abuu Darr: ninkaan maxaad u damiinatay ma aqoon ayaad u lahayd? wuxu yiri Abuu Darr maya Wallahi waxaan ka cabsaday in ladhaho dadkii kheyrka ayaa ka dhamaaday, nimankii Aabbahood ladilay ayaa arrinkii layaabay waxayna dhaheen Amiirkii Mu'miniintow waan cafinnay ninkaan, Cumar ayaa dhahay maxaa dhacay oo u cafiseen? waxay dhaheen waxaan ka cabsanay in ladhoho dadkii waxaa ka dhamaaday cafiskii.
Anna waxaan usoo qoray Qisadaan inaan ladhihin dadkii waxaa ka dhamaaday dad kheyrka dadka ugu yeera, ee adna gaarsii walaalaha kale.
Xigasho: C/llaahi Yuusuf Aadan